Pejy fandokoana sokatra Download sy loko maimaim-poana
Pejy fandokoana sokatra | biby mandady
Miandry anao amin'ity pejy ity ireo pejy fandoko isan-karazany momba ny sokatra. Ny pejinay fandokoana dia nalaina araka izay azo atao mba hanomezana fahalalahana mamorona araka izay azo atao ny zazavavy sy ny zazalahy. Faly izahay hamorona sary antsipiriany amin'ny fangatahana.
Sokatra pejy fandokoana
Ireo biby manokana ireo dia manaitra ny ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny azy. Noho izany fitaovam-piadiana matevina izay azo antoka fa mitaky hery be dia be rehefa mandroso nefa manome fiarovana. Mirary fahafinaretana mijery ny fanangonana pejy fandokoana maimaimpoana. Ny tsindry iray amin'ireto rohy manaraka ireto dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:​
Sokatra ho an'ny ankizy kely
Teny lakile fanampiny: sokatra, sokatra
Sokatra mandala - mandala biby